5 Casharro Photoshop ah si loo abuuro badhannada shabakadda | Abuurista khadka tooska ah
Qayb muhiim ah oo ka mid ah naqshadeynta bogga, waa habka ay adeegsadayaashu u galaan una dhex maraan barta. Midka ugu weyn, dabcan, waa inaad gujisaa badhannada, markaa waa inaan hubinnaa inay muuqaal ahaan soo jiidasho leeyihiin. Waan kula wadaagaynaa markaa 5 Casharro Photoshop ah si loo abuuro badhannada shabakadda.
Tabobar badhanka shabakada dhalaalaya. Tani waa casharro aan ku baran doonno sida loo sameeyo badhan loogu talagalay bogga, oo leh naqshad dhalaalaya, oo lagu daray hooska oo siinaya dhinac qoto dheer. Casharku wuxuu ka kooban yahay 5 talaabo oo kaliya.
Tababarka badhanka qaabdhismeedka. Casharradan, oo waliba ka kooban 5 tallaabo, waxaan ku ogaan doonnaa sida aan ugu abuuri karno badhan qaabeysan oo loogu talagalay degelkeenna. Waxaan ku shaqeyn doonnaa karti, qalab xulid, wejiyada, qaababka lakabka, saamaynta, iyo inbadan.
Tababaro badhannada la safeeyey. Tani waa casharro aad u wanaagsan oo lagu abuurayo badhano hufan oo leh Photoshop oo lagu daro saamaynta dabeecadeed ee aan inta badan aragno markii aan gujinayo badhannada u muuqda inay leeyihiin dhaqdhaqaaq iyo beddelayaan midabka. Waxaa jira 31 talaabo oo ay ka mid yihiin sameynta HTML iyo CSS code.
Badhamada dhalaalaya cashar. Kani waa cashar 9-tallaabo ah oo Photoshop ah oo si fudud loo soo dejisan karo maxaa yeelay waxaa lagu abuuray hal sawir. Waxaa jira qoraal, tilmaamo iyo sawirro si nidaamka uga dhigo mid la fahmi karo.
Tababarro badhannada midabada leh. Kani waa cashar si cadaalad ah u dhameystiran oo aan aad u balaadhnayn, kaas oo lagu baray abuurida badhano yaryar oo midabbo leh. Sidii kuwii hore oo kale, aalado kala duwan ayaa loo isticmaalaa si loo abuuro qaabka badhamada, lagu daro midabada, loo habeeyo hooska, qaababka lakabka iyo inbadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 5 Casharrada Photoshop si loo abuuro badhannada shabakadda